Nidaamka Qabashada Hawada, Darajada Sifaynta Boorka, Albaabka Qolka Nadiifka ah - TekMax
Dalian TekMax, oo la aasaasay 2005 oo leh caasimad diiwaangashan oo ah RMB20 milyan, waa shirkad hal-abuurnimo farsamo sare leh oo ku takhasustay la-talinta, naqshadeynta, dhismaha, tijaabinta, hawlgalka iyo dayactirka nidaamka bay'ada la kontoroolo. Tan iyo aasaaskii, shirkaddu waxay ku urursanayd berrinkii teknolojiyadda nadiifinta iyo maareynta arjiga, waxay soo aruurisay kartida maareynta injineernimada sare ee gudaha oo ka badan 80 qof…
Waxaa la aasaasay 2005
16 sano oo waayo -aragnimo ah
In ka badan 400 oo qof
MOS gacanta lagu sameeyay roo nadiif ah ...
Magnesium oxysulfide panel insulation fire (oo sida caadiga ah loo yaqaan godka magnesium oxysulfide godan) waa shey udub dhexaad u ah guddiyada nadiifinta birta midabka. Waxay ka samaysan tahay magnesium sulfate, magnesium oxide iyo agab kale, oo la dahaadhay oo la qaabeeyey oo la bogsiiyey. Waa nooc cagaaran, bay'ad ahaan u habboon nooc cusub oo isdaahirinta ah iyo badeecada ilaalinta kulaylka. Marka la barbardhigo noocyada kale ee alaabta birta ah ee saxan birta ah, waxay leedahay faa'iidooyinka dabka, biyuhu, dahaarka kaamerada, fl ...
Gacan -gacmeed godan MgO cl ...
1. Codsiyo baaxad leh: Badeecadaha waxaa loo adeegsadaa saqafka qolka nadiifka ah, xayndaabyada iyo alaabta nadiifta ah, dhirta warshadaha, bakhaarada, kaydinta qabow, guddiyada hawo-qaboojinta. 2. Kala -soocidda badeecadda: Badeecadaha waxaa ka mid ah dhagaxa dhagaxa dhagaxa ah ee dhagaxa dhagaxa ah, aluminium dusha sare ah (warqad) malabka malabka malabka, sagxadda dusha sare ee gypsum, birta sagxadda dhogorta dhagaxa dhagaxa dhagaxa sare ah, lakabka dusha sare ee gypsum extrusion oo la xoojiyay sarkaalka suufka. Waxaan sidoo kale soo saari karnaa saaxiib gaar ah oo muhiim ah ...
Gacan -ku -samayska dhogor dhagaxa ...
Guddida daahirinta dhogorta dhagaxu waxay u qaybsan tahay laba nooc: guddi dhogor dhagaxa oo mashiin lagu sameeyey iyo guddi dhogor dhagaxa oo gacanta lagu sameeyey. Waxaa ka mid ah, gudiga dhogorta dhagaxa ee gacan -ku -samaysku wuxuu u qaybsan yahay guddi gacan -ku -samays ah oo dhogor dhagaxa ka samaysan, hal guddi gacan -ku -samays ah oo dhogor dhagaxa MgO ah iyo guddi gacan -ku -samee ah oo dhogor dhagaxa MgO ah. Guddi -daahirinta dhogorta dhagaxa iyo habka wax -soo -saarkiisa ayaa ah ikhtiraacyo aad u horumarsan ilaa hadda. Gudiga dhogorta dhagaxa ee mashiinka lagu sameeyay ayaa u adeegsada dhogor dhagaxa u adkaysta oo ah waxyaabaha udub dhexaadka u ah waxaana ka sii daraya waxyaabo badan ...
Mg laba-dhinac Buugga ...
Gudiga qolka nadiifta ah ee MgO wuxuu leeyahay iska caabin dab oo wanaagsan waana guddi aan guban karin. Waqtiga gubashada joogtada ah waa eber, 800 ° C ma gubto, 1200 ° C bilaa olol, oo wuxuu gaaraa heerka ugu sarreeya ee aan dabka karin ee A1. Nidaamka qaybsiga ee ka samaysan keel tayo sare leh wuxuu leeyahay xadka iska caabinta dabka oo ah 3 saacadood. Xagga sare, tamar aad u badan oo kuleyl ah ayaa lagu nuugi karaa habka gubashada dabka, taasoo dib u dhigeysa kororka heerkulka deegaanka. Xilliga qalalan, qabow iyo qoyan, bandhigga ...
Nidaam hawo nadiif ah oo duleel ah
Qolal nadiif ah oo loogu talagalay microelectronics iyo farmashiyaha ...
Nadiifinta laambadda UV
Waxyaabaha saameeya saameynta ultraviol ...
Nidaamka xakamaynta kombiyuutarka
Sababtoo ah horumarinta tiknoolajiyada kombiyuutarka, ...
Purifi qarxa oo aan caddayn ...
Waxqabadka qarxa oo aan caddayn qarax-caddayn ...
Nidaamyada korontadu waxay ka muuqdaan dhammaan dhinacyada nolosheenna
Nidaamyada korontadu waxay ka soo baxaan dhammaan dhinacyada nolosheena ， sida: laambadda is-daahirinta ee la galiyay, laambadda daahirinta saqafka, laambad daahirinta qarxa, laambadda jeermis-dilaha ee birta ah, laambadda soo-dhoweynta aluminium iyo wixii la mid ah …… Maxay yihiin hababka rakibidda nalalka nadiifinta ? 1. ...
Horumarinta farsamada qolka nadiifta ah
Qolka nadiifka ah waxaa loola jeedaa ka saaridda walxaha, hawo waxyeello leh, bakteeriya iyo wasakhda kale ee hawada gudaheeda meel bannaan, iyo xakamaynta heerkulka gudaha, nadaafadda, cadaadiska gudaha, xawaaraha hawada iyo qaybinta hawada, buuqa, gariirka, nalalka, iyo guurka korontada gudaheeda ...
Daaqadda Qolka nadiifka ah, Sifaynta Unugga Hawada Cusub, Qolka Nadiifka ah, Habka Biyaha Qaboojiyay, Daaqadda Qolka Nadiifinta Qolka, Qaboojiyaha Hawada Qolka nadiifka ah,